घरघरमा साबुन बाँड्दै अध्यक्ष बम – Yug Aahwan Daily
Friday 7th May 2021/
YUGAAWHAN NATIONAL DAILY (2078-01-24)
बालुटारबाट हेलिकोप्टर चढेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न हेटौंडा पुगे गृहमन्त्री थापा
वीरेन्द्रनगरमा २५ शय्याको कोभिड अस्पताल शुभारम्भ
सिम्ताले तयारी गर्याे अक्सिजन सहितको ५० बेडकाे आइसुलेसन कक्ष
दूध बिक्री नहुँदा गाईलाई नै खुवाउन बाध्य हुँदै सु्र्खेतका किसान
कार्टुन : लु लु... डुबाएर देखाओ त !!
घरघरमा साबुन बाँड्दै अध्यक्ष बम
युग संवाददाता । १७ बैशाख २०७७, बुधबार १६:२३ मा प्रकाशित
503 पटक हेरिएको
कालिकोट, १७ बैशाख ।
जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा रहेका नागरिकलाई घरघरमा गएर सावुन वितरण गर्दै आइरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्नका लागि सरसफाईका सामाग्री गाउँपालिकाले वितरण गर्दै आएको छ ।
पलाँता गाउँपालिकाको वडा नं. १ बाट सरसफाईका लागि सावुन वितरण सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम पलाती कान्छाले बताए । उनका अनुसार प्रत्येक घरधुरीमा ६ पिस नुहाउने सावुन र २ पिस लुगाधुने सावुन वितरण सुरु गरिएको छ ।
पलाँता गाउँपालिकाका नागरिकलाई सरसफाईमा कमी हुन नदिनका लागि गाउँपालिकाले सावुन वितरणलाई तिव्रता दिएको छ । कोरोना भाईरसबाट बच्नका लागि जनचेतना सहित सावुन वितरणमा आफुहरु लागि परेको अध्यक्ष बमले बताए । उनले भने ‘आफु नागरिकको सेवामा लागेकाले नागरिकलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि सामाग्रीको कमि हुन दिदैन, म जनताको सेवक हौं ।’
कार्टुन : लु लु… डुबाएर देखाओ त !!